Gịnị bụ imegharị ihe: njirimara, uru na ebumnuche | Mmeghari ohuru Green
Mmegharị bụ ihe na -arịwanye elu n'omume mmadụ niile n'ụbọchị anyị kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị amabeghị kedu ihe na -emegharị Kwuru n'ụzọ ziri ezi. Nke ahụ bụ, kedụ ụdị usoro eji eji ihe mkpofu emegharị ọzọ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ngwaahịa ọhụrụ. E nwere ọtụtụ ụdị ihe eji emegharị ihe na -arụ ọrụ iji nweta mkpokọta mkpofu nke a ga -edobe wee buga ya na osisi nrụgharị. Ọ bụ ebe ahụ, mgbe ọtụtụ usoro gasịrị, a ga -ebute ha na ngwaahịa ọhụrụ.
N'edemede anyị ga -agwa gị ihe imegharị ihe bụ, njirimara ya na ihe kpatara o ji dị mkpa imegharị.
1 Gịnị bụ imegharị ihe
2 Gịnị mere imegharị ihe dị mkpa?
3 Omume obodo
4 Ọhụrụ ngwaahịa si n'efu
Imegharị bụ usoro ịnakọta ihe wee tụgharịa ha ka ọ bụrụ ngwaahịa ọhụrụ; ma ọ bụghị, a ga -atụfu ngwaahịa ndị a dị ka ahịhịa. Enwere ụdị isi atọ. Imegharị ihe eji emegharị ma ọ bụ mechiri emechi na-atụgharị ihe ahụ ka ọ bụrụ otu ihe, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ n'ime akwụkwọ ka ukwuu, ma ọ bụ iko soda n'ime iko soda ndị ọzọ. Ọkwa 2 na -atụgharị ngwaahịa tụfuru atụfu n'ime ihe ndị ọzọ, ọbụlagodi na ejiri otu ihe ahụ mee ha. Mbibi nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ kemịkal iji mepụta ihe dị iche na ha.
Ọ bụ ezie na enwere ike chịkọta ya na ichekwa akụ sitere n'okike na ibelata njupụta nke akụrụngwa, si otú a na -echebe ebe obibi, enwere ọtụtụ uru. Ọ na -enyekwa aka ịchekwa ume, n'ihi na ngwaahịa nrụgharị na -ewepụ ọtụtụ usoro dị mkpa na usoro nrụpụta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ga -achọkwu ume iji wepụta, nụchaa, bufee ma hazie akụrụngwa karịa ịgbanwe ihe ndị emegharịrị emegharịrị.
Dabere na National Institutes of Health, "imegharị aluminom chọrọ ume 95% na -erughị ike karịa iji akụrụngwa mepụta aluminomỌ bụ ezie na iji nchara nchara dochie raw ore iji mepụta nchara ọhụrụ chọrọ mbelata mmiri 40% yana 97% na mkpofu. »« Igwe eji emegharị emegharị nwere ike ịchekwa 60% ume na mmepụta; 40% akwụkwọ akụkọ emegharịrị; plastik emegharịrị, 70%; na iko 40% emegharịrị emegharị ».
Ya mere, mbelata nrigbu nke ogbunigwe, ebe a na -agbari okwute na oke ohia, na -ezere nchagharị na ntụgharị ụlọ ọrụ nke akụrụngwa ndị a, yana ịchekwa ume ike, ga -enyere aka nke ukwuu. belata ikuku carbon dioxide (CO2) na gas ndị ọzọ na -emepụta griin (GHG). , Isi ihe kpatara okpomoku zuru ụwa ọnụ), na mgbakwunye ikuku, ala na mmetọ mmiri. N'ihi ihe eji emegharị emegharị, nde tọn 18 nke carbon dioxide nke a na -echekwa na UK kwa afọ bụ nde ụgbọ ala ise n'okporo ụzọ.
Gịnị mere imegharị ihe dị mkpa?
Imegharị bụ otu n'ime ọrụ dị mfe na nke bara uru anyị nwere ike ime kwa ụbọchị. Ka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ nwee ike isonye, ​​ọbụlagodi obere ụlọ nwere ike isonye. Ọ bụ ezie na ọ bụ ụmụ mmadụ na -ahụ maka imepụta nnukwu ihe mkpofu, imegharị ihe bụkwa ihe atụ nke ọrụ mmadụ na nchekwa gburugburu ebe obibi. Mgbe ụfọdụ anyị ka na -ajụ imegharị ihe.
Yabụ, naanị ihe anyị ga -eme bụ imerụ onwe anyị na gburugburu anyị ahụ n'oge dị mkpirikpi na n'ọdịnihu. Nke a bụ okwu na -echegbu onwe ya maka nna ma ọ bụ nne ọ bụla, obere mmegharị a bụ akụkụ nke oriri eji eme ihe, ọ ga -enyekwa ụmụ anyị ohere ịnụ ụtọ ụwa na -acha akwụkwọ ndụ na -acha anụnụ anụnụ. Obodo niile nke obodo anyị na -etinye igbe ndị enwere ike ịtụfu n'ime arịa anyị tụfuru, ma ha bụ ihe ọkụkụ, akwụkwọ, plastik ma ọ bụ iko, anyị nwere ike webata ha. Enwekwara ụfọdụ ebe nhicha ebe ị nwere ike were ihe dịka ngwa ma ọ bụ osisi.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike idowe akpa ahụ n'ụlọ gị iji kwalite mmegharị nke ngwaahịa ndị dabara adaba ma nyere ezinụlọ niile aka inweta agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị ma gbanwee mmụọ nke ndị gbara gị gburugburu.
Site n'iwebata agwa eji emegharị ụlọ anyị nwere ike nweta uru ndị a:
Belata oriri ike. Ọ bụrụ na anyị emegharịgharị, anyị ga -ebelata mmịpụta, ibufe na nhazi nke akụrụngwa ọhụrụ, nke ga -ebelata oke ike achọrọ iji rụọ usoro ndị a.
Belata ikuku carbon dioxide na ikuku. Ka ike oriri na -ebelata, mmepụta carbon dioxide anyị ga -ebelata yana mmetụta griin haus ga -ebelatakwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, imegharị ihe n'ụlọ pụtara inyere ụwa aka na inyere aka ịlụso mgbanwe ihu igwe ọgụ.
Belata mmetọ ikuku. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị na -eche banyere mmekọrịta dị n'etiti mma ikuku na ahụike. Dị ka Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) si kwuo, ọdịnaya nke mmetọ ndị a na -agbada ala, ka usoro akwara obi na akụkụ iku ume anyị dị mma. Ọ bụrụ na anyị echee ikuku nke ụmụ anyị nwoke na ụmụ nwanyị na -eku ume ka ha na -egwu egwu n'ogige ntụrụndụ ma ọ bụ n'okporo ámá nke nnukwu obodo, cheta ihe ole na ole.
Ọhụrụ ngwaahịa si n'efu
Iji ghọta mkpa nrụgharịgharị, otu akụkụ bụ isi bụ iji mkpofu emepụta ngwaahịa ọhụrụ. Enwere ike iji ọtụtụ igbe akpụkpọ ụkwụ, site na tetrabriks, taya nke nwere ike gbanwee ka ọ bụrụ sọks soda, ajị anụ, wdg. Enwere ike iji ụdị mkpofu ọ bụla mepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Ecodesign mụrụ site na echiche ọhụrụ nke teknụzụ a. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ewepụtala atụmatụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ebumnuche nke imepụta ngwaahịa ọhụrụ ebe echekwara gburugburu. Ha nwedịrị ike jikwaa ihe dị iche iche dịka akara okporo ụzọ na taya, na -enye ha ihe ọhụrụ. Enwere ike iji ụdị ihe ọ bụla mee ihe ọzọ iji gbatị ndụ ha bara uru, na n'ụzọ dị otu a enwere ike gbanwee ha maka ojiji ọhụrụ.
Imegharị n'ụlọ pụtara ịchekwa gburugburu ebe obibi, nke dịkwa oke mkpa dị ka inye aka n'ịmepụta na idobe ọrụ. N'ihi na usoro imegharị ihe mkpofu chọrọ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ịnakọta ihe dị iche iche wee hazie ha.
Na Spain anyị nwere ndị otu anaghị akwụ ụgwọ Ecovidrio na Ecoembes, ị ga -ahụkwa na ha na -etinye aka na mmegharị ihe. Idogharị ihe nwekwara ike mejuputa atumatu ezubere ijikọ otu ndị dara ogbenye n'ime ọha mmadụ na ndị ọrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe imegharị ihe na ihe bụ uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Gịnị bụ imegharị ihe
Imegharị bụ mkpebi dị mma nke ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ga -eme kamakwa n'ụlọ na site na gọọmentị. Echere m mgbe niile na ekwesịrị ịchepụta ngwaahịa anyị na -emepụta ka enwere ike megharịa nkwakọ ngwaahịa ha ma ọ bụ megharịa ya, mana ọ dị nwute na anyị enweghị ọtụtụ mmata gburugburu ebe obibi na agbanyeghị na ejiri nkwakọ ngwaahịa emegharị ya, ndị na -eri ihe anaghị emegharị ha mana anyị na -atụfu ha. n'ime ahịhịa, anyị na -eme omume adịghị mma. Agbanyeghị, ekwenyere m na opekata mpe n'ime obodo dịka nke m, Colombia, anyị enweela ọganihu n'okwu nrụgharị ahụ, anyị na -ahụkwa ọrụ dịka ụlọ ejiri karama rọba wuo nke kwesịrị ka amara ya niile. Anyị ka nwere, anyị ga -agarịrị n'ihu, dị ka oghere anyanwụ, ibelata osisi, ụgbọ ala elektrọnik.
Kedu ihe bụ isi mmalite ume